Khabiirka Kala Duwan: Sababta Maxay Jabhada ONLF u Dhacday?
Khiyaamadda internetka waxay khatar weyn u tahay ganacsiga e-ganacsiga. Caadi ahaan,websaydhadu waxay ka warqabaan khatarta khatarta khiyaamo marka ay helaan jadwalka ugu horreeya. Inkasta oo qaabkan khayaanada uu ku badan yahay gobollo badanee adduunka, U.S wuxu culeyska saaraa inta badan khasaarooyinka laga helo khiyaaliga internetka.
Khiyaamadda internetka waxay ku badan tahay sababo kala duwan. Max Bell, Maamulaha Guusha Macaamiisha ee Sare ,ayaa ku habboon xaqiiqda been-abuurka ah ee khadka tooska ah ee internetka iyada oo ujeedadu tahay in lagaa caawiyo wax ka qabashada weerarrada.
Macluumaadka kaarka deynta la soo xaday waa sahlan tahay inaad gadato. Khiyaamada Internetka ma ahan mudnaanta saresoo saarka liiska hay'adaha fulinta sharciga sababtoo ah ururinta caddayn ku filan iyo khayraadka si loo xukumo kiisaska noocaas ah waa mid adag. SidaNatiijada, xukunka waa mid dhif ah.
sida khiyaanada shabakadda internetka u shaqeyso
Macluumaadka kaararka deynta waxaa laga xaday dambiilayaasha ciribtirka ah ama shabakad ballaaranof khiyaamo xirfad leh.
Caadi ahaan, khabiiro shakhsiyadeed ama kuwa dembiyada ayaa weerara ganacsiyada iyo ururadasi aad u hesho macluumaad noocaas ah oo ah maaliyad ama shakhsiyeed. Marka ay helaan xogta lagama maarmaanka ah, waxay ku iibiyaan suuqa madow. Xogta dheeraadka ahHackers-ku waxay ku saabsan yihiin kaarar leh, qiimaha sare ee macluumaadka suuqa madow.
Xogta la soo xaday ayaa lagu iibiyaa dhinac saddexaad.
Waqtiga intiisa badan, dadka wax xadida xogta shaqsiyadeed ama maaliyadeed isku mid maahandadka isticmaala macluumaadka. Caadi ahaan, weerarka weyn ee weyn, ayaa dhici karta in bilaysku bilaabo bilawga inuu isticmaalo xogta si uu u sameeyo khiyaano.
Dood-wadaagayaashu waxay tijaabiyaan oo ka saaraan kaarka.
Marka khayaanada ay helaan xogta kaararka deynta, waxay kaadhadhka kaabayaasha firfircoon ka dhigaan hurdadakaararka. Si aad u ogaatid in kaararka uu firfircoon yahay, khiyaamo waxay sameeyaan iibsiyada yaryar intarneedka. Haddii macaamilku uu guuleysto, waxay bilaabayaan daalkaarka deynta.
Iyadoo ay ku xiran tahay inta akhbaarta heysata macluumaadka ay haystaan, waxay ku dhaafi karaansida mulkiilayaasha sharciga ah ee kaarka iyo xitaa garaacday filim shaashadda internetka ee ciyaarta.
Sababta maxkamadeynta khayaanada internetka waa naadir
Qaadashada kambiyuutarrada si ay buuggu u badanaaba waxay u tahay shaqeyn kulul sababo badan. Marka hore, abaaritaanku waa inuu ka gudbaa xudduudaha gobolka iyo xuduudaha caalamiga ah ee sababa dhibaatooyinka foosha.
Marka labaad, ururinta caddaynta khayaanada internetka mar kasta way adag tahay. Khiyaanada qofkawuxuu u aqoonsadaa qofka kaarka leh inuu diiwaangeliyo cinwaanka cusub ee iimeylka iyo kirada boosteejada oo hoos yimaada magac been ah. Tani waxay ka baxaysaa caddayn aad u yar oo la xidhiidhadembiga loo jeediyay khayaanada. Natiijo ahaan, hay'adaha sharci fulinta waxaa laga yaabaa inaanay haysanin caddaymo ku filan si loo xukumo dembiga.
Waxaa intaa dheer, dambiyada e-commerce waxaa badanaa loo arkaa inay yihiin dhibaatada ugu hooseysa.Tani waa sababta oo ah qadarka lacagta la xaday waa mid aad u hooseeya. Isla mar ahaantaana, dhibbanaha waxaa laga yaabaa inaanay diyaar u ahayn inuu raaco khayaanadagaar ahaan haddii milkiilaha kaarka la hubsado inuu soo celiyo bangiga bixiyay kaarka. Markaad isbarbardhigto celceliskamacaamiisha e-commerce lacag lumiso khayaanada kiisaska FBI iyo hay'adaha kale ee sharci fulinta ka wada xaajoodaan goobahooda, aad bilowdosi aad u fahamto sababta khatarta ganacsiga e-ganacsiga ay tahay mid muhiimad u leh hay'adahaas. Halkaa, ma aha hay'adaha sida FBIiska indha tiri kiisaska noocaas ah, halkii ayan haysanin shaqaale ku filan si ay ula socdaan dambiilayaashan internetka ah Source .